प्रचण्डको पहिलो घेरामा ‘पिएलए कमान्डो’ : कहा थिए कसरी आए ? « Bagmati Online
प्रचण्डको पहिलो घेरामा ‘पिएलए कमान्डो’ : कहा थिए कसरी आए ?
सैद्धान्तिक बिषयलाइ थाती राखेर हतारोमा सगठनात्मक एकता गरेको सत्तारुढ दल (नेकपा) बनेको थियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेको चुनावी तालमेल सगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाउने घोषणा गरेका थिए । आ आफ्नो केन्द्रिय समितिमा समेत छलफल नगरी दुई नेताहरु प्रचण्ड र ओलीको घोषणामै नेकपा गठन भएको थियो । सुरुवाती केही समय एक अर्काको प्रसंंसामा बिताएका दुई अध्यक्ष बिस्तारै एक अर्का बिरोध गर्न थाले । यति सम्मकी बिरोध हुँदै ष’ड्यन्त्र सम्म गर्न लागेको समेत आ’रोप लगाउदै पार्टी बिभाजन गर्ने काम समेत भयो ।
लामो समयको बिवाद र छिनाझप्टी पछि सत्तारुढ दल नेकपा लगभग फुटेको छ । अहिले प्रचण्ड नेपाल पक्ष सडक संघर्षमा छ भने ओलीले सत्ताको घोडामै छन । यतिबेला नेकपाका दुई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री समेतका रहेका अर्का अध्यक्ष केपी ओलीको सुरक्षाको बिषयमा लिएर चर्चा भैरहेको छ । सरकारले हालै मात्र पुर्व भिआइपीहरुको सुरक्षाको रहेको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको लगत्तै पुर्व प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डको सुरक्षामा केही बदलाव देखिएको छ । आजकल प्रचण्डको वरिपरि एक नयाँ स्कार्पियो गाडीमा ६ जनाको कालो युनिफर्ममा पुर्व जनमुक्ति सेना कमान्डो रहने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुरक्षालाइ विशेष ख्याल गर्ने भन्दै ‘वाई’ क्याटोगोरीको सुरक्षा ब्यवस्था देखिन थालेको छ । जबकी यो प्रधानमन्त्रीको सवालमा विशेष परिस्थिति बाहेक अरु बेला लागु हुनेगरेको थिएन । यो क्याटोगोरीको सुरक्षा पुर्व राजाहरुले लिने गरेका थिए ।
प्रचण्ड सग ‘पिएलएको कमाण्डो’ टोली : ओली सरकार हेरेको हेरेयै
सरकारले सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको लगतै प्रचण्डले पुर्व जनमु’क्ति से’ना’को टोलीलाइ सु’र’क्षा’को जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ । आजकल का’लो सु’ट, का’लो चस्मासहित ज्यानप’रेका ६ जना युवा रातो नम्बर प्लेट भएको स्कोर्पियो गाडीबाट फुत्त निस्कछन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सरकारी सुरक्षाकर्मी भन्दा पहिला नै यो टोलीले प्रचण्डको गाडी रोकिएपछि घे’रा हल्छन् र प्रचण्डलाई गाडीबाट उत्रँदा वरिपरीको सबै निग’रानी गर्छन्।
टेलिभिजनका पर्दामा उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम उनले आफ्ना निम्ति खटाएका स्नाइ’प’र कमा’ण्डो टोली जसरी उनको सु’रक्षा’मा खटिएको देखिन्छन् त्यस्तै शैलीमा प्रचण्डको स्ना’इ’प’र टोली खटिएको देखेपछि उनको सुरक्षा’र्थ खटिएका सश’स्त्र प्रहरीका सुर’क्षाकर्मीहरु पनि केही दिनदेखि अन्यौलमा छन्।
प्रचण्डका वरिपरि बा ९ प ६३९९ नम्बरको रातो नम्बर प्लेटको स्कोर्पियो गाडीमा देखिएका का’ला सुट’धा’री स्न्याइ’प’र क’मा’ण्डो’हरु को हुन् ? राज्यका सु’र’क्षा निकायहरुलाई थाहै नदिई प्रचण्डको रक्षाका लागि खटिएका यी कमा’ण्डो’हरु कसको नियन्त्र’ण, रेखदेख र क’मा’ण्ड’मा छन् भन्ने कुरा सा’र्व’जा’निक भएको छैन । स्रोतअनुसार, यो टोली गएको अघिल्लो बुधबारदेखि प्रचण्डको साथमा देखिएको छ।
प्रचण्डका वरिपरि बा ९ प ६३९९ नम्बरको रातो नम्बर प्लेटको स्कोर्पियो गाडीमा देखिएका का’ला सुट’धा’री स्न्याइ’प’र क’मा’ण्डो’हरु को हुन्? राज्यका सु’र’क्षा निकायहरुलाई आधिकारिकरुपमा थाहै नदिई प्रचण्डको र’क्षा’का लागि खटिएका यी क’मा’ण्डो’हरु कसको नियन्त्र’ण, रेखदेख र क’माण्डमा छन्, सार्वजानिक भएको छैन।
सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सु’र’क्षा’मा खटिएका अगुवा सु’र’क्षा’कर्मी र गाडी फिर्ता गरेपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवा सु’र’क्षा पूर्वज’न’मु’क्ति से’ना (पि’ए’ल’ए)ले नीजि गाडीमा अनिवार्य का’र्गे’ट दिन थालेका छन्।
स्ना’इ’प’र जस्ता देखिने एकै ड्रे’स’का करिब आधा दर्जन तालिम’प्राप्त पिलएलएले सुर’क्षा दिन थालेको हो। उनीहरू तस्बिरमा देखिएको नीजि नम्बर प्लेटको स्कारपियो गाडीमा अगुवा सु’र’क्षा’का रुपमा देखा परेका हुन शा’न्ति प्रक्रियामा आउनासाथ प्रचण्डको पहिलो सु’र’क्षा घे’रामा रहेका तालिमप्राप्त पिएलए खटिएका हुन्। उनका साथमा ह’ति’यार भने छैन। तर, सबै ल’डा’कू तालि’म’प्राप्त र पो’ख्त रहेको बताइएको छ।
बा ९ प ६३९९ नम्बरको रातो नम्बर प्लेटको गाडीमा ति पि’ए’ल’ए खटिएका छन्। जुन विषयको जानकारी सरकारलाई दिइएको छैन। एक सातादेखि पिए’ल’एको का’र्गे’ट हिँड्न थालेको छ।प्रचण्डको सुरक्षा’मा ५९ जना सु’रक्षा’क’र्मी परिचालन गरिएको थियो। जसमा ४३ जना फि’र्ता भएपछि पुर्व पिएलए खटाइएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाइ ‘Y’ क्याटागोरीको सुरक्षा
सोमबार सिंहदरबारमा सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस ब्रिफिङ कार्यक्रम थियो । संसद् विघटन गरेपछि भौतिक रुपमा निकै सक्रिय देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबारको सुरक्षा घेरामा सबैको नजर पर्‍यो । विगतभन्दा केही फरक रुपमा सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीको घेरामा थिए प्रधानमन्त्री ओली । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसबारेमा व्यापक छलफल भएको छ । यसअघि भीआईपी र भीभीआईपीहरुलाई बक्स आकारको सुरक्षा दिइन्थ्यो ।
बक्स आकारको सुरक्षामा दुईजना सुरक्षाकर्मी अघि, दुईजना पछि र एकजना भीभीआईपीसँगै हुन्थे । प्रायः नेपालमा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई दिइने सुरक्षा भनेको बक्स आकारकै हो ।तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार भने ‘वाइ टाइप क्याटागोरी सेक्युरिटी’ दिइएको थियो । तर सामान्य अवस्थामा यस्तो प्रकारको सुरक्षा भने दिइँदैन ।
उच्च सुरक्षा ख’तरा भएका व्यक्तिहरुलाई यस्तो सुुरक्षा दिइने सुरक्षा स्रोतले जानकारी दियो ।नेपालमा पनि यो नयाँ प्रयोग भने होइन । जानकार सुरक्षा अधिकारीहरु भन्छन्, “पहिले पहिले राजालाई यस्तै सुरक्षा दिइन्थ्यो । जनयु’द्धकालमा सुरक्षा थ्रे’ट बढेपछि कहिलेकाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई पनि दिने गरिएको थियो । तर गणतन्त्र आएपछि पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई यसरी सुरक्षा व्यवस्था गरेको पाइयो ।” सुरक्षाका हिसाबले सिंहदरबार अति सुरक्षित स्थानमध्येको एक हो । तर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने सिंहदरबारभित्रै उच्च जो’खिममा दिइने सुरक्षा दिइनुलाई कतिपयले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् ।
सादा पोशाकमा खटिने सुरक्षा टोलीको काम भने भीभीआईपी नजिकै सहजै कोही आउन नपाउन् भन्ने रहेको एक सुरक्षा अधिकारीले बताएकाछन । यसबाहेक कालोझण्डा देखाउनसक्ने, भीडबाट कुनै वस्तु प्रहार गर्न सक्नेलगायतका अन्य सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न भीआईपीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गरिन्छ । यसअघि पनि उल्लेख्य मात्रामा सुरक्षाकर्मीहरु प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने गरेको भए पनि धेरैलाई थाहा नहुने तर यसपटक ठाउँका कारण पनि त्यस्तो देखिएको बताए ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु भन्छन्,“पहिले पनि सादा पोशाकको विशेष सुरक्षा टोली त हुन्थ्यो नै । तर देखिनेगरि थोरै हुन्थे । कतिपय कार्यक्रममा सहभागीकै बीचमा बस्थे । गणतन्त्रपछि देखिनेगरी यस्तो सुरक्षा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले मात्रै लिएका छन् ।”